Semalt: Nzira Yokudzivirira Kwose Kwenyika MuGoogle Chrome Pasina Anowedzera
Kuvhara webhusaiti (s) kunogona kukosha kune vashandisi vakawanda vekombiyuta. Somuenzaniso, vamwe vanhu vanogona kusarudza kudzivirira vana kupinda mawebsite akasiyana-siyana. Mune zvimwe zviitiko, ungada kuti browser yako igare yakasununguka kubva kune dzimwe nzvimbo nekuda kwechimwe chikonzero - dominio y hosting compra. Mune zviitiko izvi, kushandisa sarudzo yekuchengetedza Chrome browser yako kubva pakuwana nzvimbo idzi kunogona kugadzirisa.
Igor Gamanenko, nyanzvi yepamusoro kubva ku Semalt , inotarisa munhungamiro iyi pamusoro pekutsvaga kweC Chrome semuenzaniso, asi nzira idzi dzinogona kushanda kune dzimwe machechi mushure mekuita nenzira yakasiyana.
Kuwanda kwemishonga inowanika pane dambudziko iri inosanganisira mapurogiramu uye zvinyorwa. Mune zvimwe zviitiko, mapurogiramu uye browser extensions inotora RAM inobatsira kushanda kwekombiyuta. Mune dzimwe mamiriro ezvinhu, zvikwata uye mapurogiramu zvinogona kurwisa kushungurudzwa kwepurogiramu pamwe nekuwedzerwa kusina kubvumirwa kunotungamirira kukarasikirwa nemashoko evanhu. Ichi SEO chinyorwa chinoshandisa nzira mbiri dzakanakisisa kutsanangura nzira yekudzivirira mawebsite pasina kushandisa chero zvipi zvese mapurogiramu kana zvinyorwa:
1. Kuchengetedza mawebhusayithi kubva paFiki File
Kudzivirira kuwanikwa kwewebsite kubva kune fomu yefambi kunogona. Kana munhu achishandisa kombiyuta yemakombiyuta, unogona kudzivirira mawebhusayithi kushandisa nzira iri pasi apa:
Dzvanya bhatani rokutanga.
Panzvimbo yekutsvaga inooneka, faira "C: \_ Windows \_ system32 \_ drivers \_" uye hit hit.
Kokufa kworudyi uye vhura 'fomu' faira uchishandisa kadhi.
Tora '127.0.0..1 'pasi pebhuku racho, ipapo nzvimbo uye URL yewebsite yaunoda kudzivisa.
Usaisa muzvinyorwa zvinyorwa zviripo mubhuku rino.
Zvakakosha kuti tisabatanidza "http:" kana "www" sezvaunoda kuidzivisa pasinei neprotocol.
Chengetedza gwaro uye tangazve kombiyuta yako.
Iyi nzira inofanira kubudirira kubvisa mazita enyu mazita kubva ku Chrome Chrome. Icho chinonyengera chinogona kutarisana nedzimwe sangano rekushandura zvinoenderana nenyaya. Zvisinei, inoshanda paWindows 7.
2. Kuchengetedza mawebhusayithi pa Chrome Mavhuro
Vamwe vashandisi vangawana nzira iri pamusoro apa zvigadzirwa zvekushandisa pamakombiyuta avo. Munyaya iyi, vanogona kushandisa Chrome web browser pachayo kuti vadzivise nzvimbo dzekutsvaga. Somuenzaniso, munhu anogona kugadzira kambani yevatariri vechiK Chrome nokuda kwekushandisa mafaira ewebsite. Kugadzira kambani yevatariri, unogona kutevera nzira iyi:
Vhura Chrome uye enda kumiganhu.
Pasi pe 'vanhu' vatungamira, tora 'Wedzera munhu.'
Wedzera munhu kumamiriro ezvinhu "Kudzora uye ona mawebsite aya munhu anoshanya" akatariswa.
Kubva pano, unogona kudzora mawebsite uchishandisa dashboard yako yepamusoro.
Mawebhusayithi anogona kudzivirirwa kubva pane 'mvumo' yemenyu pane 'nzvimbo yekuchengetedza mawebsite'.
Paunenge uchishandisa iyo internet, pane zvingasimuka zvimwe zvido zvekudzivirira kuwanikwa kwewebsite kubva kune browser. Mune zviitiko izvi, vanhu vanoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vasapedze kuwanika kwemasayiti aya kubva kune avo vanoona. Nzira dzepamutemo dzekudzivirira hutachiwana hwehutachiona hunogona kusanganisira kuisa zvinyorwa pane musikana kuti aite basa iri. Vamwe vanhu vanoshandisa PC mapurogiramu anobatsira vashanduri kugumira kushanyira mamwe mawebsite. Izvi zvinokonzerwa nehutano mukuchengeteka kwetaneti pamwe chete nekushanda kwekombiyuta. Iyi SEO mutungamiri ine maitiro ekudzivirira mawebhusayithi achishandisa nzira dzakasiyana. Iwe unogona kudzidza maitiro ekugadzira kana kudzivisa kuwanika kwewebsite kubva paFiki File.